192.168.1.1 USERNAME, CHINHU CHENYANISO
Kuita router yako yakachengeteka iwe unofanirwa kushandura zita rekushandura neshoko rechigwaro rinowanzo nyore nyore kuparadzanisa. Nokuda kwekuchengetedzwa kweWi-Fi, unofanira kushandura shanduro yeSSID yekutengesa zita rine zita rakasiyana.
Zvichida username uye password yevarters vazhinji ndei:
Uyezve, unofanira kufambisa WPA2 uye PSK yeWi-Fi kuchengetedzwa. Iwe unofanirwa kushandisa shanduro yakanyora yakavharidzirwa yeWPA2 uye PSK kuita kuti Wi-Fi ive yakachengeteka.
CHII CHANGU CHOKUTA KWANGU IP ADDRESS
Kugadzira router itsva kana kugadzirisa network yako kunoda router IP Address iyo inotungamirira kumashoko ekutumira we router yako. Mune mamiriro ezvinhu akawanda aya maIndaneti asina kushandiswa 192.168.0.1, 10.0.0.0.1 kana 192.168.2.1 inogona kushandiswa. Kuziva zvakanyanya kuverenga pasi apa.
Shandura 192.16811 ROUTER PASSWORD
Pinda kune yako router admin peji rine zita rekushandisa nephasiwedi> enda kune epamberi magadziriso> Router Admin> Chinja password> Pinda iro rekare password uye Nyowani Nyowani uye chengeta. Hurray!
IP ADDRESS YAVARI ROUTERS WITH DEFAULT USERNAME AND PASSWORD:
192.168.1.254 arun admin / password
Cisco 192.168.1.1 arun arun
192.168.1.254 arun arun
192.168.2.1 arun arun
Netgear 192.168.1.1 arun arun
Netgear 192.168.1.1 arun pasiwedhi
10.10.1.1 arun arun
10.1.1.1 kn MiniAP
Bhiriyoni 192.168.1.254 arun arun
NZIRA YOKUTEZA KUTI CISCO INOTANGA KUSHANDISA 192.168.1.1
Danho 1: Unganidza Cisco Router kuPC
Danho 2: Unganidzai adapta uye tendera Router uye PC.
Nhanho 3: Vhura chero Browser uye funga 192.168.1.1 uye dikai Enter.
Danho 4: Tumira Cisco username uye password (admin-admin)
Nhanho 5: Cisco Router Admin Peji ichazaruka uye iye zvino unogona zvose zvigadziro zvekushandiswa.
D-LINK ROUTER LOGIN SETUP
Danho 1: Unganidza D-Link router kune PC
Nhanho 2: Unganidza adapta
Nhanho 3: Vhura chero web browser uye funga http://192.168.1.1 uye chengetedza kupinda
Nhanho 4: D-Link router mutungamiri achabuda. Iye zvino faira muzita rekushandura uye password.
Nhanho 1: Plug Netgear router neako Windows PC
Nhanho 2: Vhura chero webhu browser uye nyora 192.168.1.1> Pinda.
Nhanho 3: Isa muzita rekushandisa router uye password. Ita iyo mitambo isina kushandiswa.
TP-LINK ROUTER LOGIN SETUP
Danho 1: Shandisa TP-LINK Router yako nePC nekambani yeRJ45.
Danho 2: Vhura chero shanduro. Tora 192.168.1.1 uye chengetedza kupinda
Nhanho 3: Tumira username usingasipo uye password sezvataurwa pamusoro apa.
Nhanho 4: Router Admin peji ichazaruka. Iye zvino shandisa zvirongwa zvinodiwa.
Kana uri kutarisana nenyaya kana uchibatanidza Router saka izvi zvinogona kuva nyaya dzinogona kuitika.
Kero yakakwana yeIndaneti haina kugadzirirwa zvakanaka.
Kero isina kukodzera IP kero inoshandiswa mukutsvaga kana zvisiri izvo zvinogadzirirwa.
Iro router- PC inogumira ine nyaya dzehutano.
Vhurazve router yako zvakanaka. Tora bhatani rekutanga kwema 10 seconds.
Iyo yekupedzisira gwara reRemote Desktop - dzora PC yako painternet!
Haikwanise kuwana Router kumisikidza peji uchishandisa login URL kana IP kero